किम जोंग जस्तै देखिने व्यक्ति सार्बजनिक, अब के हुन्छ उत्तर काेरीयामा? (तस्विरसहित) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/किम जोंग जस्तै देखिने व्यक्ति सार्बजनिक, अब के हुन्छ उत्तर काेरीयामा? (तस्विरसहित)
किम जोंग जस्तै देखिने व्यक्ति सार्बजनिक, अब के हुन्छ उत्तर काेरीयामा? (तस्विरसहित)
लगभग २० दिन संसारबाट लुकेको पछि अचानक मे २ मा उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग सार्वजनिक रूपमा देखा पर्‍यो। उत्तर कोरियाको तर्फबाट, यो भनिन्छ कि किम जोंग-अन स्वस्थ छन्। उनको मृत्युको खबर गलत छ। तर अब एक नयाँ जानकारी बाहिर आउँदैछ कि किम जोंगले कसैलाई जो उसको जस्तो देखिन्छ, उदाहरणका लागि शरीर डबल प्रयोग गर्दछ।
यस समयमा सोशल मिडियामा शरीर डबल प्रयोगको बारेमा बहस रहेको छ। पूर्व ब्रिटेनका सांसद लुइस मैन्स ढुक्क छन् कि किम जोंग उनको शरीर डबल उत्तर कोरियाको सरकारले प्रयोग गर्यो। लुइसले ट्विटरमा यसको प्रमाण पनि दियो। उहि समयमा, केहि मानिसहरू विश्वास गर्दछन् कि देखाइएको तस्वीरहरू नक्कली छन्। तर लुइस दाबी गर्छन् कि उत्तर कोरियाले किम जोंग उनको दाँत, नाडीको दाग, र कानको आकारमा भिन्नताका आधारमा किम जोंग उनको शरीरलाई डबल प्रयोग गर्दछ।
इतिहासमा पनि यो विश्वास गरिएको थियो कि केही शासकहरूले उनीहरूलाई जस्तो देखिने मानिसहरू प्रयोग गर्थे। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन र सद्दाम हुसेनको नाम पनि यसमा थपिएको छ। लुइसले लेखे कि यदि तपाइँ कोरियाली प्रचार द्वारा जारी फोटो मा हेर्नुभयो भने, तपाइँ किम जोंग उन दाँत मा एक फरक छ पाउनुहुनेछ। यो मानिस हुन सक्दैन। म यसमा बहस गर्न चाहन्न। तर चित्रहरु मा देखी दुई किम एक समान छैन।
यदि तपाईंले किम जोंग उनको कान ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो भने, तपाईंलाई फरक पर्नेछ। एउटा तस्वीरमा तिनीहरूका कानहरू सिधा छन्, जबकि एक चित्रमा तिनीहरू थोरै टेढ़ी छन्। सँगै जबडा पूर्ण रूपमा गोल छैन।उही समयमा, जेनिफर नाम गरेको ब्लगरले किमका धेरै चित्रहरू ट्विटरमा राखेका छन्। तिनीहरूमा उनले किम जोंग उनका दाँत, कान र कपालहरू कती फरक छन् भनेर देखाए।
जेनिफर जेंगको तस्वीरले किम जोंग उनको दाहिने हातको नाडीको नजिकको छापमा केन्द्रित छ। यो विश्वास गरिन्छ कि त्यो छाप वास्तविक किम जोंग उनको कलाईमा थिएन। जबकि, केही व्यक्तिहरू भन्दै छन् कि यो मोटो सुईको भित्र घुसाइएको मोटो सुईको चिन्ह हो।मे २ मा, कोरियाली मिडियाले किम जोंग उन एक मल संयंत्रको उद्घाटनमा गएको देखाए। ऊ त्यहाँ धेरै स्वस्थ देखिन्थ्यो।
किन पक्राउ गर्‍यो कञ्चनपुर प्रहरीले यी चार युवतीलाई? यस्तो रहेछ कारण
काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो यस्तो चेतावनी